Viva Sancho Villa dia sehatra mahafinaritra sy voalohany | Androidsis
Ny sehatra tsara dia tsy maintsy manana lafiny maro amin'izany tariho izahay hamoy tena amin'ny ambaratonga misy azy. Ireo mitsambikina ireo, na fahaizana manokana sasany dia mety ho iray amin'ireo singa manan-danja tadiavina, na koa loko iray amin'ny sary an-tsary izay manaitra antsika hankafy ny hetsika mahafinaritra an'ny tena mpilalao fototra.
Eto isika dia afaka mihaona mivantana amin'ny Viva Sancho Villa, sehatra mahafinaritra tokoa harena sarobidy loko lehibe misaotra ireo loko fisaka izay lasa antso fanairana ho an'ny mpampiasa rehetra. Tsy miatrika lalao amin'ny maodelim-freemium isika, fa tsy maintsy mandoa vola iray isika, fa ny marina dia mendrika izany satria nanisy peta-kofehy azy io saika tamin'ny zava-drehetra. Safidy tsara ny Viva Sancho Villa raha misy te hiala amin'io maodely freemium io.
1 Ho ela velona i Mexico!
2 Pancho Villa dia nitsangana tamin'ny maty noho ny fahafinaretana lehibe indrindra
Ho ela velona i Mexico!
Viva Sancho Villa no mitondra antsika any izany kolontsaina meksikana rehetra izany nanao ahoana ny lazany tamin'izany firenena lehibe izany sy ny mponina ao aminy. Fijerena & fikosehana amin'ny fikitihana sehatra lehibe izay hahatonga antsika ho lasa Sancho Villa malaza.
Hampiasa ny machete lehibe sy revolver hanafaka ny tanin'i Magico amin'ny herin'ny devoly simba amin'ny saga feno tantaram-bahoaka, loko ary fiainana. Satria io no mandany ny Viva Sancho Villa miaraka amin'ireo toetrany sy fiaviany manavaka ny lokony fisaka, fa ny tonony voalohany dia misy refy lehibe.
Un tontolo tsy azo antoka mozika, fomban-drazana, angano, zavakanto ary zava-kanto hamakivakiana tanàna maro loko, saha mampidi-doza, ala mahafinaritra ary maro hafa izay miandry antsika amin'ity lalao video manokana sy tsara ity.
Pancho Villa dia nitsangana tamin'ny maty noho ny fahafinaretana lehibe indrindra
Afaka manao izany isika hitsambikina karazana havoana rehetras, atsipazo ny fanafihana na mihazakazaha haingana mba hilalao lalao tena mahomby amin'ity karazana lalao ity. Ahoana no ahafahantsika mifanatrika amin'ny fahavalo amin'ny karazana fitambarana isan-karazany toy ny confetti, fanfare na hiakiaka mihitsy. Tena mahafinaritra tokoa amin'ity lafiny ity ary mametraka azy amin'ny toerana somary miavaka.
Gameblyr dia nanao asa tena tsara Amin'ity lalao video ity ho an'ny Android, ny zava-misy dia eo amin'ny lafiny teknika dia saika amboradara lafatra miaraka amin'ny fomba manokana amin'ny sary, izay ahalalany tsara ireo loko fisaka ireo mba hanomezana izany 3D izany amin'ny fotoana sasany miavaka. Ny mozika noforoniny tsara, ny vokany ary ny vokany sary dia nanampy betsaka mba hitondra antsika iray amin'ireo lalao video noforonina tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Tsy ho hitanao maimaim-poana, amin'ny € 4,22 Azonao atao ny manomboka amin'io traikefa nahafinaritra Meksikana io izay i Pancho Villa lehibe no mpandray anjara fototra. Raha lalao karama ianao, dia tokony ho anao izany.
Hack & slash hafa? Eto…
Ho ela velona Sancho Villa
Fijery sary mahafinaritra
Manana fandoavam-bola ao anatin'ny fampiharana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Viva Sancho Villa, sehatra Hack & Slash avo lenta amin'ny lafiny rehetra